Momba ny GIS | GIS
Momba ny GIS
Talen'ny mpitantana sy mpitantana
Fanolorana ny serivisy
Ny fanaraha-maso kalitao momba ny vokatra
Ny fitsirihana ny vokatra
Fanaraha-maso ny vokatra indostrialy
Manara-maso ny fanaraha-maso
Famakafakana ny vokatra
Famolavolana, fanamboarana ary fanamarinana amin'ny famarana
Famotorana amin'ny fahavoazana
Fitantanana sy fampandrosoana fampandrosoana
Famakafakana ny trano
Ny fanombanana ny orinasa mpivarotra
Diagnosis & optimista amin'ny rafi-pitantanana
Fitantanana ny kalitao tetikasa
Fifanarahana momba ny teknolojia
Fifanarahana momba ny andraikitra ara-tsosialy
Fanekena ny famerenam-panjakana
Fanekena ny vokatra momba ny fambolena
Vokatra momba ny mekanika
ANSI sy AQL
Momba ny tatitra
Ny fitantanana ny kalitao
Asa atao amin'ny mpiasa
GIS (General Inspection Service Co, Ltd) dia injeniera momba ny kalitao matihanina sy ny fanaraha-maso momba ny fitantanana ary orinasa orinasa. Niorina ny fanampiana ny mpanjifa hanorina sy hanatsara ny fiantohana kalitao sy ny fanaraha-maso kalitao ary hanampy amin'ny mpanjifa hamolavola sy hanara-maso ny mpamatsy azy ireo. Nomen'ny alalàn'ny fitantanana ankapobeny ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny Quarantine an'ny PR China, ny GIS dia nanolotra ny serivisy fanaraha-maso ny antoko fahatelo, ny fanombanana ny zavamaniry ary koa ny fitantanana ny kalitao, ny fitiliana ny vokatra ary ny fisafoana ary ny fitsidihana ny kalitao hatramin'ny taona 2005.
2005, GIS dia natambatry ny Ivotoerana Assurance Center of China Association for Quality and Fujian Provincial Quality Association.
2009, GIS nahazo mari-pankasitrahana ISO9001 avy amin'ny Center Assurance Center of China Association for Quality.
2010, GIS nahazo mari-pankasitrahana momba ny fametrahana fanadinana ho an'ny fametrahana ny fanafarana entana sy ny fanondranana entana avy amin'ny AQSIQ.
2012, GIS dia nanana ny maha-mpikambana ao amin'ny China Enter-exit Inspection and Quarantine Association ary voafidy ho mpikarakara ny mpitantana ny Import sy Export Commodity Inspection and Survey sampana an'ny Fikambanana.
2013, GIS nahazo ny taratasy fanamarinana momba ny CNAS-C101 (ISO / IEC 17020) avy amin'ny China National Accreditation.
2015 ， GIS dia neken'ny Fujian Inspection sy Quarantine Association ho toy ny Fivondronan'ny Fujian maimaimpoana Fujian maimaimpoana (vokatra vita amin'ny indostria).
2016, nekena ny GIS ho toy ny faritany Fujian momba ny serivisy atolotry ny serivisy ho an'ny orinasa madinika sy salantsalany,
Manana birao 12 manerana ny faritra Sina ny GIS. Ny foibe dia any Fuzhou, Fujian. Ny biraon'ny 11 hafa dia any Shunde, Dongguan, Shenzhen, Xiamen, Ningbo, Hangzhou, Suzhou, Qingdao, Tianjin, Jinan ary Zhengzhou. Raha atao teny iray, dia nanangana tambajotram-panaraha-maso any Shina izahay. Hatramin'izao, GIS dia manana mpiasa maherin'ny 100 hanompo ny mpanjifa. Ireo mpanolotsaina momba ny fitantanana kalitao, mpanadihady zavamaniry, mpanara-maso vokatra, injeniera mpanamboatra vokatra ary injeniera manara-penitra dia injeniera mahay avokoa. Maromaro ihany koa ny fanondranana zokiny an-tsokosoko amin'ny indostria maro isan-karazany amin'ny GIS. Taorian'ny ezaka an-taonany maro, ny GIS dia miezaka ny ho lasa iray amin'ireo orinasa mpifaninana sy manan-kery indrindra amin'ity orinasa any Shina ity.
Ampio ireo mpanjifa manangana na manatsara ny rafitra fanaraha-maso kalitao, fantaro ireo olana eo amin'ny vokatra ary manolora vahaolana matihanina hampihenana ny risika amin'ny fahazoana entana mivarotra ary manamaivana ny fahasimban'ny mpanjifa noho ny vokatra ambany.
Ampio ny mpanjifa hampivoatra sy hanara-maso ireo mpamatsy. Manoro hevitra ny matihanina amin'ny serivisy hanolo-tena hanatsara ny famokarana mpamokatra sy ny fahazoana antoka tsara sy ny fifehezana kalitao, hampiroborobo ny fitomboan'ny mpamatsy sy ny mpanjifa.
Manome fanaraha-maso ny antoko fahatelo matihanina, fanombanana ny zava-maniry, fanaraha-maso ny kalitao, fanaraha-maso ny vokatra ary ny fanandramana ary ny serivisy momba ny serasera momba ny teknolojia sy ny fanaraha-maso momba ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny ISO 9001, ISO 14001, ISO / TSI 16949, SA8000, QS9000, OHSAS18000, HACCP, GMP, fiarovana fananana ara-tsaina. fenitra ho an'ny indostria isan-karazany.
Ny rafi-pitantanana sy ny rafi-pitantanan-tsoratry ny sehatra e-varotra, fanoloran-tena handrafitra ny mpanamboatra sy ny fanombohana orinasa varotra, fanaraha-maso ny vokatra, fitantanana tetikasa ho an'ny sehatra e-orinasa sy mpivarotra an-tserasera.
Ny filozofia momba ny raharaham-barotra: mpanjifa, mpiasa, fampandrosoana.
Adidintsika ny manatsara hatrany ny kalitaonay serivisy mba hahatonga ny mpanjifanay afa-po ny GIS mifantoka amin'ny fitomboan'ny mpiasa. Hanao izay tratry ny sainay izahay mba hanomezana tombontsoa ho an'ny mpiasanay. Amin'izany fomba izany, afaka miara-misalahy miaraka amin'ny mpanjifantsika isika.
Hajao ny ambiansy ao am-piasana; Ankafizo ny fahafinaretana eo amin'ny fiainana.
Ny kalitao dia mamaritra ny lanja; Ny andraikitra no manapa ny maha-olona
Hahatonga ny herin'ny tanjaky ny fitadiavana ny takian'ny mpanjifa; Alao ny fahaiza-mamorona, fahaiza-manao mpanatanteraka ary hery manohana ny famahana ny fandaharan'asan'ny mpanjifa.
Misionan'ny orinasa ：
Mahazo ny fifampatokisana sy ny fanajana avy amin'ny mpanjifa rehetra
Floor10, trano C, Unis Sci-Tech Park, No. 30 Wulongjiang Road, Zoro teknolojia, Fuzhou, Fujian, Sina
© Copyright - 2010-2022: Zo rehetra voatokana. Torohevitra - Product mafana - Sitemap - an'ny AMP
Famakafakana trano, Fanombohana voalohany, Fanaraha-maso feno amin'ny Internet, Fandraisana ny fanaraha-maso, fanaraha-maso amin'ny , Amin'ny fizahana fizahana,